5 Famous Film Places Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Famous Film Places Na Europe
Oge Ọgụgụ: 6 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 10/07/2020)
Europe na-akpali nka na filmmakers si gburugburu ụwa, ya mere, ọ bụghị ihe ijuanya na ọ na-adọta film eso myiri! Discover 5 Famous Film Places na Europe na akwụkwọ gị ememe na eme na-emikpu onwe gị na ọkacha mmasị gị na fim maka a zuru okè ezumike na European Best ebe.
Rail transport is the most environment friendly way to travel. Isiokwu a na-dere ịkụziri banyere Train Travel na e mere site Zọpụta A Train ndị dị ọnụ ala Train Tickets weebụsaịtị Na The World.
1. Famous Film Places Na Europe: Notting Hill, London, UK
Cheta Hugh enyem acha anụnụ anụnụ anya na fim Notting Hill? Discover Notting Hill, otu n'ime London kasị mma ebe na n'ụlọ ndị kasị quintessentially British rom-com. Ọ bụla na-ekiri a film ike enyemaka ma ka ị na-eche a obere mma ... The akụkụ kasị mma banyere Notting Hill bụ na ihe ka ukwuu ọ na-filmed Central London! Nke a pụtara na ị nwere ike ịga ọtụtụ n'ime iconic ebe e gosiri na ihe nkiri!
Na oghere Mpaghara, Hugh Grants agwa, William Thacker ejegharị site Portobello Road Market. Nke a ererimbot ama ahịa bụghị naanị uru a nleta n'ihi na ọ bụ otu n'ime ndị kasị iconic Notting Hill Filming ọnọdụ, ma n'ihi na ahịa ya bụ nanị mara mma ma na jupụtara quirky antiques dị nnọọ eche ka a chọpụtara.
Osote, anyị nwere ike ikwu na ị na onyeisi ka Ekpe Bookshop, 142 Portobello Road. The ọmarịcha obere ụlọ ahịa akwụkwọ ekesịpde Will na fim emi odude ke 142 Portobello Road. Mgbe oge nke filming, ọ bụ ihe ochie shop. taa, adreesị bụ n'ụlọ ka a akpụkpọ ụkwụ ahịa. Ọ bụ kwuru na a dị nso Bookshop site na aha The Travel Bookshop dabeere na 13-15 Blenheim Close bụ n'ike mmụọ nsọ n'ihi na fim ụlọ ahịa.
Nke a iconic 1,000 otu afọ ochie nnukwu ụlọ bụ a mmasị nke film ụlọ ọrụ, nke mere na anyị nwere ike na-ahapụ ya anya anyị 5 Famous Film Places na Europe ndepụta. Ọ bụ ihe kasị ma ama dị ka ebe maka Hogwarts na Harry Potter. Alnwick Castle abụghị naanị otu n'ime ndị kasị ibu Bi castles na England na 1,000 afọ, ma ọ bụ na-ihe nke a nkiri kpakpando n'onwe ya!
Nke a ọmarịcha obí eze bụ otu n'ime ndị kasị iconic na Britain, enwe mere anya na-ewu ewu na fim na-egosi na telivishọn dị ka Elizabeth, Robin Hood: Prince of ohi, na Downton Abbey Christmas pụrụ iche, na ya kasị ama ọrụ dị Hogwarts School of Ịta Amoosu na Wizardry na mbụ na nke abụọ Harry Potter fim.
Ọ bụ na nnukwu ụlọ elu na Harry nwere ya mbụ Quidditch ihe (nnukwu ụlọ ugbu a ụsụụ ndị agha broomstick ọzụzụ ofụri okpomọkụ ọnwa) na ntụpọ ebe Weasleys efe efe Ford Anglia okuku rutere na ụbọchị mbụ nke akwụkwọ.
Wezụga ya forays na nnukwu na obere meziri, ndị dị ebube na nnukwu ụlọ na-nwere a ogologo na ọgaranya akụkọ ihe mere. Ọ e wuru gburugburu 1096 na-emi odude ke English asị nke Northumberland. Taa ọ bụ n'ụlọ na Duke nke Northumberland na ezinụlọ ya na nke abụọ kasị ukwuu Bi nnukwu ụlọ na England mgbe Windsor Castle.
3. Famous Film Places Na Europe: Hamlet, Dunnottar Castle, Scotland
Dị ka castles gaa, ya siri ike iche n'echiche a ọzọ ime na ịrịba ama ebe karịa Dunnottar. Ikekwe na kasị impenetrable ọnọdụ ndị niile Scottish castles, onye a na-anọdụ n'elu nke ya n'elu ugwu dịịrị banye na mmiri na-aga Aberdeen, gbachiteere n'akụkụ niile site ikike ndị sitere n'okike. Ọ bụ n'ezie nakwa ma ama n'ihi na emenye Princess Meridas ezinụlọ n'ụlọ na Disney Pixars Nwere Obi Ike na okpukpu abụọ maka Elsinore na Franco Zeffirellis Hamlet!
Ya na ọnọdụ n'ohu dị ka otu n'ime ndị kasị dị ịrịba ama n'ebe ọ bụla na ị-ohere eri anya gị na ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị dị ịrịba coastlines na Scotland. Wind kpochapụ grassland, olulu ọnụ ọnụ ugwu, na thrashing ebili mmiri niile na-ezukọta na otu nnọọ ihunanya backdrop.
Dunnottar-awade ihe ghọta nnukwu ụlọ chebe onwe na nwere ezi dose of akụkọ omimi. Whigs volt ga-eme ka ntutu isi gị ike na ọ ọgwụgwụ ka a ga-ụka (ugbu a mkpọmkpọ ebe) torched site William Wallace.
Ọ bụ ezie na Dunnottar na-amụba na ewu ewu, ọ bụghị otu n'ime busier Scottish castles. Plus, ya size pụtara na ị pụrụ n'ụzọ dị mfe inwe n'ebe ìgwè mmadụ ahụ na-enwe ya pụrụ iche ebe fọrọ nke nta na gị onwe gị. Ọ bụkwa a zuru okè stop oyi na Angus Ala gbara osimiri okirikiri Nsoro, a n'ezie sinik Scottish ụzọ njem.
Mgbe ị na-eche nke Paris, France, ị na-akpaghị aka na-eche nke eiffel tower. Na ihe mere ga-adịghị ị? Ọ bụ mara mma, na na ọ bụ ebube, ma anyị niile hụrụ ya a puku ugboro niile postkaadị, akwụkwọ ịma ọkwa, ahịa na ngwá ahịa na ozi ọma photos kemgbe anyị ụmụaka. Ma, e nwere ihe n'ezie ajụkwa guzo dị nnọọ a nkume itu si Eiffel: na inception akwa.
Pont de Bir Hakeim bụ a àkwà mmiri agafe Seine River na Paris. Wuru karịrị otu narị afọ gara aga na eji iguzosi ike n'ihe na-eje ozi dị ka a osimiri ịgafe ebe ndị obodo, ma na 2010 ọ ghọrọ a ezi ihe nkiri. Ọ bụ mgbe ahụ Christopher Nolan bịarutere, ya na ndi oru ugbo, na nsonye Leonardo DiCaprio, Ellen Page, na Joseph Gordon Levitt.
na 2010 ihe kpokọtara mere na a akwa. Na oghere Mpaghara, Ellen Pages agwa Ariadne na-amụta otú na-ewu na nrọ.
5. Famous Film Places Na Europe: The Life na ndị mara mma, Arezzo, Italy
Nke a nkiri ka na-eweta a dọkatụrụ adọka m anya mgbe m ọbụna na-eche banyere ya. M na-ele nke a ma ama film n'ụlọ akwụkwọ, ọtụtụ afọ gara aga, na na ọ dịghị mgbe ekpe m na ebe nchekwa. Nke a bụ ihe mere m n'onwe m gara ịhụ a ma ama film ntụpọ onwe m! Roberto Benigni 1997 Oscar-emeri La Vita e Bella (Ndụ Mara mma) bụ ihe na-! Nịm na WWII, ọ na-agwa akụkọ nke a Jewish Italian nwoke aha ya bụ Guido Orefice. O zutere na ada na ịhụnanya na-ahụ mara mma Dora na ha nwere a nwa, Joshua, ọnụ.
Akụkọ ahụ bụ banyere Guidos ezinụlọ na otú ndụ ha ga-esi n'elu si n'ala zuo mgbe ha na-ẹka a n'ogige ịta ahụhụ. ezie na e nwere, iji ndo nwa-ya n'aka egwu nke ya na gburugburu, Guido weaves na-esi ọtụtụ akụkọ. Oge ha nọ n'ogige ahụ bụ nanị ihe egwuregwu. Filmed gafee ọtụtụ tent centerpiece mmalite nke film, Otú ọ dị, bụ ọmarịcha Tuscan obodo nke Arezzo.
Bologna na Arezzo tiketi
Ị na-ma-njikere ibudata otu n'ime ndị a nkiri na-ekiri ma ọ bụ mmọdo-eme atụmatụ gị na njem na-ama, na-adịghị ị? Gịnị ma i mee ma! gaba na n'elu Save A Train na akwụkwọ a tiketi nkeji otu nke 5 Famous Film Places na Europe!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “5 Famous Film Places Na Europe” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffamous-film-spots-europe%2F – (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)